10 / 04 / 2021 11 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1069 Views စာ0မှတ်ချက် 71030 Looney Tunes Collectible အသေးစား, bugs Bunny, Daffy ဘဲ, Facebook က, Instagram ကို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Looney Tunes, Lola ယုန်, အမ်ဗင်artIan, ဝက် petunia, ဝက်ဝက်, လမ်းမကြီး Runner, မြန်ဆန် Gonzales, ကြောင် Sylvester, Tasmanian Devil, Tweety, တွစ်တာ, အီးဝံပုလှေ Wile
တစ် ဦး ထုတ်ဖေါ်ဖွယ်ရှိသောနောက်အဘယ်သူမျှမအံ့သြသွားလိမ့်မယ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးကိုတရားဝင် Looney Tunes မှ themed ဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။
Bugs Bunny မှ Daffy Duck သို့ကာတွန်း Warner Brothers ၏ဇာတ်ကောင်များသည်နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာများဖြစ်လိမ့်မည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား သရုပ်ဆောင် ၁၂ ယောက်နှင့်အတူစီးရီးများသည်ပထမဆုံးအကြိမ် minifigure ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြသည်။
အောက်ပါ မရည်ရွယ်ဘဲထုတ်ဖေါ် အစောပိုင်းရောင်းချမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Lego အုပ်စုသည်ယခုဆိုရှယ်မီဒီယာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးစီးရီးအသစ်များကိုပြသထားပြီး၊ အသေးစားဓာတ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအပြည့်စုံကိုပြသသည်။
Looney Tunes! ? သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ဘယ်ပါလဲ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!?#LoonyTunes #LEGOMinifigures များ #လီဂို pic.twitter.com/D1XS4nMoF0
- Lego (@LEGO_Group) ဧပြီလ 10, 2021
အကယ်၍ ကာတွန်းဘောင်းဘီတိုများနှင့်သင်သိပ်မရင်းနှီးပါကအကွာအဝေးတွင်ပါဝင်သော Looney Tunes အားလုံးဒီမှာပါ။
W E ကိုဝံပုလှေ
ဇာတ်ကောင်များ၏ပရိသတ်များသည် Road Runner နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ငှက်မျိုးစေ့မှ Daffy Duck ၏ 'Rabbit season' နိမိတ်သို့ရရှိနိုင်မည့်ရည်ညွှန်းချက်များစွာရှိသည်။ classic အဆိုပါဘောင်းဘီတိုအတွက်အပိုင်း။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကြေငြာချက်အားလုံးသည်ထွက်ပေါ်လာမည့်နေ့စွဲနှင့်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုချန်လှပ်ထားခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီးသောအခါသင့်အားနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ဒီတော့အခုချိန်မှာတော့ Porky Pig ၏စကားများမှာဒါတွေအားလုံးပဲ။
← အခြားတည်ဆောက်စရာများဖြင့်အခြားမောက်စ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ LEGO Art 31202 DisneyMickey မောက်စ်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: တောအုပ်ကိုအုပ်ထိန်းသူ →